BBC Somali - Warar - Banaanbaxyo ka dhacay Puntland
Banaanbaxyo ka dhacay Puntland
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 24 Novermber, 2012, 05:40 GMT 08:40 SGA
Banaanbaxa ka dhacay magaalada Qardho ayaa waxa ku dhaawacmay laba qof
Ugu yaraan laba qof ayaa ku dhaawacmay magaalada Qardho ee Puntland kadib markii ciidamada amnigu ay rasaas ku fureen dad dibadbaxyo ku dhigayay magaalada.
Wararka qaar ayaa sheegaya in dadka dibedbaxayay ay ka soo horjeedaan in xilliga loo kordhiyo maamulka Puntland.
Dibadbaxayaasha ayaa wadooyinka ku gubay taayaro, iyagoo isla markaana dhagxaan tuurayay.
Dibadbaxyada ayaa ku soo beegmay xilli uu halkaas booqanayay madaxwaynaha Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole.
Sawirro laga soo qaaday Qardho ayaa muujinaya dhalinyaro, caruur iyo dumar dibedda u soo baxay oo qaarkood sitaan boorar maryo ka samaysan oo ay ku qoran yihiin hal ku dhegyo looga soo horjeedo madaxwayne Faroole.
Mid ka mid ah boorarka ayaa waxaa ku qornaa dooni mayno kororsi.